नेपाल आज | यसरी हुन्छ भिडियो लिक, जोडी हौं भन्दैमा मनपरि नखिच्नुहोस्
अपराध सुरक्षा यौन-शिक्षा समाज
मङ्गलबार, ०४ साउन २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज
दम्पत्तिका बीचमा सब चल्छ भन्दै गोप्य दृश्य छायांकन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अझ इन्टरनेटको जमानामा नेटमा हेर्दै विभिन्न आसनका क्रियाकलाप छायांकन गर्ने र बुढाबुढी रमाइलो गर्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहको बताइन्छ ।
कारणबश अलगअलग ठाऊंमा बस्ने गरेका दम्पत्तिका बीचमा साँझको समयमा फाइबर, फेसबुक र स्काइपमा शारीरिक हाउभाउसहितको नग्न संवाद हुने गर्दछ । यस्ता दृश्य रेकर्ड गर्ने र अघिपछि हेर्नेपनि गरिन्छ । तर, यही भिडियो नै बर्बादी बनेर निम्तिन सक्छ । अहिले काठमाडौंमा एक दम्पत्ति यस्तै समस्या लिएर प्रहरीको पुगेका छन् ।
तपाईले खिचेको अति गोप्य भिडियो विभिन्न हिसावले लिक हुन सक्छ ।
१) मोबाइल, कम्पुटर हराएमाः तपाईको मोबाइल वा कम्पुटर जुनसुकै बेला हराउन सक्छ । हराएपछि जस्को फेलापनि पर्न सक्छ । त्यस्तो अबश्थामा हराएको माल भन्दा त्यहां रहेको तपाईको गोप्य भीडियोले तपाईलाई बढी क्षति पुर्याउन सक्छ । मानिलिऔं, सो भिडियो कसैले फेक आइडी बनाएर अपलोड गरिदियो ? वा तपाईसँग मोलमोलाइ गर्न थाल्यो ? वा अरु केही ? तपाई हरदम डरमा रहिरहनुहुनेछ ।
२) सुटुक्क कपि हुनसक्छः तपाईको मोबाइल वा कम्पुटर चोरी नहुन सक्छ तर अरुको हातमा कुनै न कुनै बेला पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा भिडियो कपी गर्न सकिन्छ । अथवा अर्को मोवाइल वा कम्पुटरमा पठाउन सकिन्छ । ब्लुटुथ, फेसबुक भाइबर वा कुनै माध्यममा कहिलेकाहीं झुक्किएरपनि जान सक्छ । तपाईकै हातबाटपनि झुक्किएर अरुकोमा पुग्न सक्छ ।
३) ह्याकरले जेपनि गर्न सक्छन्ः तपाईको मोवाइल कम्पुटर लक हुन सक्छ । तर, यो लक सोझा साझाका लागि मात्रै बार हो । ह्याकरहरुले तपाईको गोप्य माल सहजै पहिलाउन सक्छन् । अमेरिकाको गोप्य डकुमेन्ट चुहाउन सक्नेले तपाईको माल के बाँकी राख्लान् ?
४) भाइरसले बर्बाद बनाउन सक्छः कम्पुटर वा मोबाइल ( वा अन्य कुनै )मा फाइरस लागेमा खतरा हुनसक्छ । भिडियो आफै अरुकोमा जानपनि सक्छ । गएको छ भन्ने तपाईलाई थाह नहुनपनि सक्छ । तर, बाहिर यसले डडेलो लगाइसकेको हुन्छ ।
५) नेटवर्किङः तपाईले प्रयोग गरेको नेटवर्किङका बीचमा भिडियो आदानप्रदान गर्ने व्यवश्था हुनसक्छ । यस्तो अवश्थामा तपाईले गोप्य ठानेपनि गोप्यता साझा भइसकेको हुन्छ ।
दम्पत्ति वा प्रेमी प्रेमिका भनेको छायांकनका लागि होइन । सम्बन्ध हुनसक्छ तर त्यो रेकर्ड राख्ने विषय होइन । फेरी सम्बन्ध सधैं उस्तै रहन्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाहीं रिस फेर्नपनि जानीजानी भिडियो लिक गराउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले सकेसम्म त्यस्ता भिडियो नखिचौं । खिच्नै मन लागे तत्काल सदाका लागि डिलिट गरौं । तपाईले डिलिट गरे भन्ठानेको भिडियो रिसाइकल बिनमा सुरक्षित रहेको हुनसक्छ ।
यौन भिडियो लिक भएपछि धेरैलाई जीबनभर धक्का लागेको छ । नेपालकै एक नायिकाको प्रेमीसँगको सम्बन्ध लिक भएको थियो । क्षणिक रमाइलोका लागि छाँयाकन गरेको भिडियाले जीबनभर पोल्न सक्छ । होसियार बनौं ।
राजधानीमा एक दम्पतीको अश्लिल भिडियो बजारमा आएपछि
Couple Sex Couple Vedio